Shandong New Ankai-Kitco Sowin CNC Machine Tool Co., Ltd. sikazwelonke abaxhakaxhaka lweshishini iingcali kwimveliso lwezixhobo kumatshini CNC. Xa ifilosofi "Abantu-ebomini, Technical Innovation", inkampani akamcongi akukho mizamo ukudala "-high speed, esiphezulu-ngqo, phezulu-ukuthembeka" izixhobo CNC kunye namalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda wezindlu ngenxa yamandla amaninzi kwezoqoqosho, italente enamandla zobugcisa amandla kunye nefilosofi zoshishino phambili.
Ngenxa iminyaka yemigudu, inkampani liphuhlise ngempumelelo CNC ngqo encinane bar oluzenzekelayo umatshini (eyaziwa ngokuba ngqo lathe oluzenzekelayo) lwahlulwe lwaba AK series, SM series, Sx series SC series, ekulungiseni ukujika-okusila indibanisela kwaye uva esebenzayo ezinkulu-nebhetshi multi-ntlobo eliphezulu-ngqo machining imisebenzi ka emalunga neyi-shaft ezincinane iindawo ezijikelezayo xaka. Iimveliso zethu ngendlela eliphezulu ukukwazi zokubiya, kwanjengokuba sinamalungu eziphambili ezifane nokwamkela iintlobo ngamazwe odumileyo, ngokunjalo neenkqubo imveliso kunye nobuchwepheshe abakhokelayo China. Iimveliso ngomshini sele lisetyenziswa kuqhagamshelwano, oomatshini zonyango, efrijini, izixhobo ezisebenzisa, izixhobo zombane ekhaya, aerospace, iimoto, izithuthuthu, elektroniki, Motors, ishishini iwotshi elibamba kunye namanye amashishini.
Ukususela ekuqaleni kwalo, Shandong New Ankai-Kitco Sowin CNC Machine Tool Co., Ltd. iye zisekelwe kuphando, uphuhliso kunye nokuveliswa isiphelo ophezulu-CNC lathes. Ngo-bulumko ishishini "Improvement rhoqo, Customer Ephakamileyo", inkampani unikezelwa ekubeni ovelisa izixhobo kunye nomsebenzisi wenethiwekhi okanye umboneleli kwihlabathi-phambili.